Umkhankaso omtsha wokhenketho ukhuthaza iGuam njengendawo ekhuselekileyo yokundwendwela abatyeleli
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba eziziiNdaba zokuHamba » Umkhankaso omtsha wokhenketho ukhuthaza iGuam njengendawo ekhuselekileyo yokundwendwela abatyeleli
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zeGuam Breaking • Iindaba Eziphambili zaseHawaii • iindaba • Cinezela iZaziso • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba ezahlukeneyo
I-Bureau ye-Guam yeeNdwendwe (i-GVB) iphehlelele umkhankaso omtsha okwi-intanethi owenzelwe ukuqinisekisa iindwendwe ezingenayo ukuba iGuam yindawo ekhuselekileyo nenempilo. Eli phulo lijolise ekubonakaliseni amanyathelo okhuseleko ongezelelweyo asetyenziswa ngumzi-mveliso ukugcina abahlali kunye nabatyeleli be-COVID bekhuselekile.
Ividiyo esandula ukwenziwa, enesihloko esithi "Ndwendwela iGuam Ngokukhuselekileyo" iqala ngokwamkelwa okufudumeleyo nguMongameli we-GVB kunye ne-CEO uCarl TC Gutierrez kwaye ibonisa uChe'lu i-Ko'ko 'Bird eyaziwayo ebonisa abahambi into abanokuyilindela xa besiya eGuam indawo entsha ekhuselekileyo ye-COVID. Ividiyo iya kwabelwana ngayo kwi-intanethi nabachaphazelekayo kushishino kunye neearhente zokuhamba kwiimarike eziyimithombo nakuwo onke amaphepha ezentlalo e-GVB.
Ividiyo ibonisa uChe'lu ngokukhuselekileyo ehamba ngenqwelomoya e-AB Won Pat International Airport kunye nezinto ezonwabisayo kuyo yonke iGuam. Ividiyo ijolise ekuqinisekiseni iindwendwe ngendlela emnandi nenhle yokuba ishishini lezokhenketho laseGuam kunye namashishini endawo asebenze nzima ukulungiselela i-COVID yamava akhuselekileyo.
“Njengokuba siqala ukuzinza kwesi siqhelo sitsha, isiqithi sethu siqala ukuvulwa kodwa sisahleli nesoyikiso se-COVID-19. Le vidiyo ibhekisa kwiinkqubo zempilo nezokhuseleko esinazo ukuqinisekisa ukhuseleko lwabantu abahambahambayo nabahlali bethu, ”kwabelwane nge-GVB President & CEO uCarl TC Gutierrez. “Amaqabane oshishino lweendwendwe lwaseGuam sele ephumeza iinkqubo ezifanelekileyo kunye neeprotokholi zokwenza iGuam COVID ikhuseleke. Kungcono ukubonisa into eyenziwayo yiGuam ukuze uhlale ukhuselekile ngakumbi njengoko silungiselela ukuphakamisa ukuvalwa kokuhamba kunye nokuvalelwa kwabantu. ”
Icandelo lezokhenketho laseGuam lelona lihamba phambili kwezoqoqosho kwesi siqithi, lixhasa ngokuthe ngqo nangokuthe ngqo imisebenzi engaphezulu kwama-21,000. Kwi-2019, iGuam yamkele irekhodi ye-1.6 yezigidi zabakhenkethi kunxweme lwayo. Xa i-COVID-19 yafika kunxweme lwaseGuam ngo-Matshi 15, ishishini lokhenketho kwesi siqithi layeka ukumisa uqoqosho lwesi siqithi.
Uninzi lwehlabathi luvulela kwakhona abahambi, iGuam inethuba lokwabelana ngomxholo okhuthaza umnqweno wabantu wokuhamba baye kwiindawo ezikhuselekileyo. Ukwakha kwiphulo le-GVB "Sinike uMzuzu," eyayiyilelwe ukugcina iGuam ngaphezulu kwengqondo ngexesha lobhubhane, i-ofisi ngoku yamkela umxholo kuwo onke amacandelo oshishino axhasa ukuvulwa kwesiqithi ngokuzithemba kwaye anika abahambi isiqinisekiso sokuba iGuam indawo ekhuselekileyo nenqwenelekayo.
Nantsi indlela abahlali kunye namashishini abanokuthatha inxaxheba ngayo:
1. IIVIDIYO ZEZITHUBA EZIBONISA INDLELA IGAMI ELULUNGISELELE NGAYO UKUFUMANA NGOKHUSELEKILEYO ABATYELELI
I-GVB isebenza kwizixhobo zonxibelelwano ukubonisa iGuam ikulungele ukwamkela iindwendwe. Thumela okanye wabelane ngomxholo obonisa okwenziwa sisiqithi sethu ukulungiselela ukuvulwa ngokutsha ngokuphumeza ezona ndlela zibalaseleyo zokhenketho kwihlabathi liphela.
Yenza ukhuseleko lube lolonwabisayo! Sebenzisa izikhumbuzo zokuzonwabisa ukubonisa abathengi indlela yokuthobela iinkqubo zokhuseleko zeshishini lakho.
Thumela iifoto kunye neevidiyo ezibonisa iinkqubo zokhuseleko kunye nezikhokelo zeshishini.
2. UKWANDISWA KWENKCUKACHA NAMAGCINA AMAZIKO NGOKWASEKHAYA NGOKWENZA ISIQULATHO KWI-GUAM
Thumela kwaye wabelane ngeeyure zokusebenza ezintsha, izibonelelo ezizodwa, izaphulelo kunye nokwenyusa.
Faka iifoto kunye neevidiyo ezintle zeGuam ezibonisa ukonwaba okukhuselekileyo kwimisebenzi yolonwabo, indalo, inkcubeko, kunye nokutya kunye neziselo eziya kuthi zikhohlise iindwendwe ukuba zikhethe iGuam njengendawo yabo elandelayo yeholide.
Sebenzani kunye! Iqabane namanye amashishini ukukhuthaza iimveliso kunye neenkonzo zomnye nomnye.
Ukufikelela ngakumbi kunye nokufunyanwa, qiniseka ukusebenzisa ii-hashtag #instaguam kunye #visitguam.
3. IMBONAKALO EBALASELEYO YOKUGQIBELA YOGAM
Thumela malunga nento eyenza ishishini lakho lahluke kwaye isiqithi sethu sahluke kwezinye iindawo, ezinje ngenkcubeko, ukutya, indalo, kunye neHafa Adai Spirit. Yabelana ngesiqithi sethu ngokwembono yakho.
Bonisa umoya wakho kunye nekratshi lesiqithi. Sebenzisa eli xesha ukucoca indawo yakho ukutsala abathengi, njengokongezwa kweentyatyambo zetropiki, ukhuni, kunye nezinye izinto zobugcisa ezizodwa.
4. Yabelana ngeendaba kunye neminikelo kunye ne-GVB
I-GVB ikhangele iividiyo zeGuam kunye neefoto zokwabelana kumajelo eendaba ezentlalo kunye neqonga ledijithali ekuhlaleni nakwimakethi yethu yemithombo. Ngenisa iifoto zakho, iividiyo ze-MP4 (i-hi-res 1920 x 1080 ebanzi ekhethiweyo okanye i-1080 × 1920 portrait), kunye nezibonelelo ezizodwa [imeyile ikhuselwe].
5.THATHA INXAXHEBA KWISIKHUMBUZO ESISAYO SINIKE UMZUZWANA #GUAM ISLAND
Thatha inxaxheba kwinkqubo yesiqithi sonke okanye ucoce indawo ejikeleze ikhaya lakho kunye neshishini kwaye wenze umxholo okwi-intanethi. Qiniseka ukuba usebenzisa ii-hashtag #giveusamoment kunye #guamcleanupchallenge ukuze yamkelwe.
Amashishini kunye namaqela angafunda ngakumbi ngalo msitho ngokundwendwela Guamuyinkinkinky.com okanye ngokuthumela i-imeyile ku [imeyile ikhuselwe]. Ulwazi luza kuthunyelwa kwi-Facebook ye-GVB (@guamvisitorsbureau) kunye ne-Instagram (@visitguamusa). Amavolontiya anomdla angabhalisa kwi https://bit.ly/GUAMBeautificationVolunteers.
I-GVB imema bonke abahlali kunye namashishini ukuba ancede ekulungiseleleni ukuvulwa kwakhona koqoqosho lwezokhenketho eGuam. Abantu abanomdla banokutyelela Guamuyinkinkinky.com okanye ubuze nge-imeyile apha [imeyile ikhuselwe].